IsiJalimane, iJalimane Ufundeni namuhla? - EJALIMANE
« : Januwari 12, 2014, 01:52:55 am »
Re: Ufundeni namuhla?
« Phendula #1: Januwari 21, 2014, 12:38:25 am »
I-Tabriz, i-mosque enephunga elimnandi kunazo zonke emhlabeni
ehhotela. Ngenkathi kwakhiwa i-mosque
Iphunga le-musk lengezwe odakeni.
Yize sekudlule iminyaka engama-600, kuseyi-mosque
kunuka musk ...
« Phendula #2: Januwari 21, 2014, 08:02:09 am »
Ngibonga i-tsk, nami ngiyifundile.Isihloko esihle.
« Phendula #3: Januwari 21, 2014, 11:35:39 am »
Kucashunwe ku: esma 41 - Januwari 21, 2014 ngo-12: 38: 25 am
« Phendula #4: Januwari 21, 2014, 05:31:41 pm »
Ngafunda ukungakhathazeki ngayo yonke into
« Phendula #5: Januwari 24, 2014, 02:32:40 am »
Ngithole ukuthi uMarilyn Monroe unezinzwani eziyisithupha. Angazi ukuthi izongenzela ini
"UKUHLALA NJENGAKHO KUSUKU LOKUSEBENZA LOMHLABA NGAMANDLA APHELELE UKUKWENZA UHLUKE KWABANYE UKUNIKELA IMPI EBUNZIMA EMHLABENI ..."
« Phendula #6: Mashi 14, 2014, 03: 36: 34 pm »
Ungasho kimi ukuthi ngiphindisela igama eliwubuwula.
Ngoba kumnikazi walelo gama, kunabaningi abaphansi kakhulu njengaye
kukhona amagama. Uzophendula impendulo yakho nabo futhi.
« Phendula #7: Okthoba 11, 2015, 07:37:38 pm »
-> Ngifunde ukuthi noma ngo-Okthoba isimo sezulu singabanda kakhulu. 6 ° ngokwesibonelo
« Phendula #8: Julayi 07, 2016, 01:24:22 am »
Ngifunde ukuthi impilo igcwele isimanga, ukuze ube nezinguquko ezizokwandisa impilo yakho yonke esikhathini esifushane sezinyanga ezi-1-3 noma ezi-6, ukuthi lezi zinguquko zithatha indawo yempilo yakho yonke noma zibize okwedlule.
Futhi ukuphila kuyinto enhle kakhulu, ngafunda ukuthi ukubaluleka kwayo kufanele kwaziwe kakhulu, nokuthi kufanele uphile nsuku zonke ngenkathi ujabulela lo mhlaba.
Yiba nguwe, ungachithi inombolo yakho elinganiselwe yezinsuku kulo mhlaba
« Phendula #9: Okthoba 20, 2016, 10:26:02 pm »
-> Ngifunde ukuthi izazi ezingezona ezamaSulumane ezingamaSulumane zabhala ukuhlaziya okunemininingwane eminingi kunezazi ezingamaSulumane zamaSulumane.
« Phendula #10: Novemba 11, 2016, 11:27:37 pm »
-> Ngifunde ukuthi ukuphelela kukumininingwane.